Kufa handiko kunokuvadza zvakanyanya kwaInés Plana mutengesi wepamusoro wegore? | Zvazvino Zvinyorwa
Kufa handiko kunokuvadza zvakanyanya Inés Plana mutengesi wepamusoro wegore?
Ana Lena Rivera Munoz | | Mabhuku
Kufa handiko kunonyanya kurwadza es la yekutanga novel yemunyori wenhau, Ines Plana, uye iri munzira yekuva imwe yeiyo yepamusoro yekutengesa kwegore. Kurohwa kwakadai nefirimu yekutanga chinhu chisina kujairika. Ichokwadi kuti ine mbiru dzinoverengeka kuti zvibudirire:
El rutsigiro kubva kune mukuru muparidzi: Nekuda kwekusimudzirwa kwebhuku uye yemhando yepamusoro iyo inoburitswa nayo, iko kuzvipira kukuru kweEdigital Espasa yegore rino.
Un fashoni genre: Iri dema, mutikitivha, rangano yekufungidzira.
Una nyaya yakanaka: Ongorora mweya weva protagonists, kubva kune akuvadzwa kusvika mhondi kuburikidza nevarindi vehurumende vari kuongorora nyaya iyi. Iyo ine zano rakanaka uko zvinopfuura kushamisika kune nods. Mune ino novel, iyo nekuti S kuti sei uye pamusoro pezvose, manzwiro emhedzisiro ayo zviitiko uye kuwanikwa kwavo zvinoburitsa kune avo vanobatanidzwa munyaya iyi zvakakosha.
Mira kunze kana uchiverenga Kufa handiko kunonyanya kurwadza , que munhu wese ane matambudziko, vakomana vakanaka, vakaipa vakomana uye nekubwaira kwekurova. Iyo murume noir uye hapana zvitunha zvisipo uye kunyangwe yakanaka dosi yekusuwa uye hutsinye. Kunyange zvakadaro, iko kuongorora kwemanzwiro ndicho chirevo chakakurumbira chenyaya iyi. Haisi nguva yakanaka kune chero wevatambi vari mumutambo, kunyangwe iyo katsi, iyo zvishoma nezvishoma inova imwezve kune muverengi, uye painovhura mapeji mashoma isina kuoneka, inoshamisika nezvake.
Greta anonyangira muLieutenant Julian Tresser hupenyu kuti agaremo.
Inés Plana anotiunzira nyaya yeropa uye inosuruvarisa, hapana tariro Muzviitiko zvezvakaitika kare, kunyangwe mune zvinowoneka, munhu anogona kungotarisira chimwe chinhu chakanaka kubva kune izvo zvinounzwa nehupenyu gare gare kune avo, mushure mezviitiko izvi, vachiri nemukana.
"Ainyatsoziva kuti Civil Guard ndiro boka rehunyanzvi rine mwero wepamusoro wekuzviuraya, asi haana kufunga kuti vakuru vake vanogona kuzviuraya."
Iri ibasa rekutanga iro, nepo vachiremekedza izvo zvekutanga zvemhando iyi, zvinofamba zvichibva pane zvimisikidzo uye zvisirizvo zvinoonekwa uye voenda kwavakabva. Nhoroondo umo vakaipa vakaipa zvakanyanya, vakanaka vanhu uye kupi magumo anofadza achauya, kana vakadaro, kunze kwemapeji avo.
"Julian aive azvibata kuzvidzora zvekuti dzimwe nguva zvaimuita kuti asagadzikane: kuzvidzora kwakanyanya kunogona kupwanya psychology yake kuita zvidimbu zvine chiuru, zuva raitarisirwa zvakanyanya uye pamwe nekuda kwechimwe chinhu chisina basa zvachose."
Tinovimba kuverengera Inés Plana munguva pfupi chiitiko chitsva naLieutenant Julián Tresser naCorporal Coira, uye tinovimba kuti panguva iyoyo hupenyu huchavabata zviri nani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Kufa handiko kunokuvadza zvakanyanya Inés Plana mutengesi wepamusoro wegore?
Uye mhedzisiro yechirongwa, hautaure chero chinhu? Zvigadzirise netsaona? Ini ndinonyatsofunga kuti ibhuku rakaipa: vanozvida uye vadiki mavara, zano rakatorerwa kure zvekuti rinoshamisika uye kuguma uko kunoita kuti iwe ude kurasa bhuku kure: zvinoitwa nemunyori kuzvidza uye kurerutsa muverengi. Ndingadai ndisina kuikurudzira, chaizvo.
Ana Lena Rivera akadaro
Izvi, senge zvese muhupenyu, inyaya yekuravira. Muri kutaura chokwadi kuti hapana mumwe wevanyori ari padyo nehunhu hwakanaka, vese vane poindi isina kunaka, zvimwe kunyange zvidiki zvinotadzisa muverengi kunzwa kuyemura chero chinhu. Kune rimwe divi, zvinovaita vanhu. Tinovimba unotiudza zvaungakurudzira nezvezvinoitika zvematsotsi, tichafara kuverenga nekupindura.
Pindura kuna Ana Lena Rivera
Mabhuku akanakisa echiSpanish munhoroondo
Sergio Ramírez, mutsva weCervantes Award. Matatu emabhuku ake.